ပိန္နဲသီး ကြိုက်သူလေးတွေအတွက် သတင်းကောင်း - Hello Sayarwon
ပိန္နဲသီး ကြိုက်သူလေးတွေအတွက် သတင်းကောင်း
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 19/02/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ချိုချိုလေးနဲ့ ဝါးလိုက်တိုင်း အရသာရှိတဲ့ ပိန္နဲသီး လေးက အစာလည်း ဆေး၊ ဆေးလည်း အစာဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ပါသတဲ့။
အပေါ်ခွံမှာဆူးတုံးတုံး စိပ်စိပ်လေးတွေရှိပြီး အခွံကို လှီးလိုက်တဲ့အခါ အဖြူရောင် အစေးလေးတွေထွက်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ အမျှင်လေးတွေနဲ့ အသားပြည့် အဝါရောင် ပိန္နဲမွှာ ချိုချိုလေးတွေပါ ပါတယ်။ အိမ်မာ နဲ့ အိမ်ပျော့ဆိုပြီး ကွာခြားပေမယ့် ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အာနိသင်ကတော့ အတူတူပါပဲ။
ချိုအီမွှေးတဲ့ ပိန္နဲမွှာလေးတွေ ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
စားလိုက်တိုင်း အရသာရှိတဲ့ ပိန္နဲမွှာ ချိုချိုလေးတွေက
ပိန္နဲသီး မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ကြွယ်ဝသလို ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အဆုတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ အစာရေမျိုကင်ဆာ၊ အရေပြား ကင်ဆာ နဲ့ ဆီးကျိတ် ကင်ဆာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးမှုကို ကုသပေးပြီး ဆဲလ်တွေကို ခံနိုင်ရည်တိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အဝလွန်တဲ့နှုန်းက ပိုများလာပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို အရသာရှိရှိ ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိန္နဲသီး စားပေးပါ။ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝသလို အခြားအာဟာရဓာတ်တွေလည်း ပြည့်ဝစေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်မှုက သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတာကြောင့် သွေးတိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ သွေးတိုးကျတာက ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာ၊ လေဖြတ်တာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ကင်းစေမှာပါ။
အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အစာခြေစနစ်ကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ ကင်းစေနိုင်သလို ဝမ်းမှန်စေနိုင်ပါတယ်။ အူမကြီးက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အူတွေကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်တွေ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင် ပိန္နဲသီး စားပေးလို့ရပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် နဲ့ သံဓာတ် ကြွယ်ဝမှုက ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပိန္နဲသီး က အချိုများတယ်ဆိုပေမယ့် သကြားဓာတ်က ရုတ်တရက် မြင့်တက်သွားတာမျိုး မဖြစ်စေပါဘူး။ အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှုကို ကောင်းစေနိုင်တာကြောင့် အမျိုးအစား (၁) ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေရော အမျိုးအစား(၂) ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေပါ စားသုံးလို့ရပါတယ်။
ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်မှုကြောင့် အမြင်အာရုံကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမြင်အာရုံ ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို မျက်စိမှာ အတွင်းတိမ်၊ ရေတိမ်တွေ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါ တယ်။
ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝတဲ့ ပိန္နဲသီး ကို စားပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေကို ကျန်းမာစေပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာ၊ နေရောင်ကြောင့် အသားအရေထိခိုက်တာနဲ့ အရေးအကြောင်းတွေ မဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲက အနာကို သက်သာစေတယ်
ပါးစပ်ထဲမှာ အနာဖြူဖြူလေးတွေ ပေါက်တာကြောင့် စားရသောက်ရ အခက်အခဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကုသနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ပါးစပ်ထဲက အနာတွေကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေနိုင်တဲ့ ပိန္နဲသီး စားပေးတာပါ။
ပိန္နဲသီးက နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပြီး ပိုးတွေကို သေစေနိုင်သလို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ကြွယ်ဝမှုက ခံတွင်း အနာတွေကို မြန်မြန်သက်သာစေမှာပါ။
ကယ်လ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝမှုကြောင့် အရိုးတွေကို သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် အပြင် ဗီတာမင် C နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်မှုကလည်း ကယ်လ်ဆီယမ် စုပ်ယူမှုကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ပိန္နဲသီးက သီရာမင်း နဲ့ နီကာစင်လိုမျိုး ဗီတာမင်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကြွက်သား အားနည်းတာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်မှုက ကော်လာဂျင်ထွက်ရှိအောင် လှုံဆော်ပေးပြီး အရေပြား၊ အရိုး နဲ့ တွယ်ဆက် တစ်ရှူးတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်သလို သွေးကြောတွေ နဲ့အရိုးနုတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ကော်လာဂျင်က အနာကျက်စေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
Why Is Jackfruit Good for You? Nutrition, Benefits and How To Eat It https://www.healthline.com/nutrition/jackfruit-benefits Accessed Date9April 2020
What are the health benefits of jackfruit? https://www.medicalnewstoday.com/articles/324787 Accessed Date9April 2020
10 Surprising Health Benefits Of Jackfruit You Need To Know https://www.lifehack.org/317644/10-surprising-health-benefits-jackfruit-you-need-know Accessed Date9April 2020
ပိန္နဲသီးစိမ်း ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
ရဲယို နဲ့ ကျန်းမာရေး
ဇီးသီးလေး ကပေးတဲ့ အသားအရေကျန်းမာရေး